राष्ट्र बैंकले खुलायो एकहप्ते रिपो, के हो ‘रिपो’ ?
काठमाडौं– नेपाल राष्ट्र बैंकले ५ अर्बको रिपो जारी गरेको छ । बिहीबार सूचना निकाल्दै बैंकले सातदिने रिपोका लागि बोलपत्र आह्वान गरेको हो ।
बैंकले ‘क’, ‘ख’ र ‘ग’ वर्गका बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई रिपो खरिद खुल्ला गरेको जनाएको छ । रिपोका लागि कम्तीमा ५ प्रतिशत ब्याजदर कबोल गर्नुपर्नेछ ।
रिपर्चेजको छोटकरी रुप हो, रिपो । बजारमा तरलता अभाव भएको खण्डमा छोटो समयको लागि तरलता समस्या समाधान गर्ने साधनको रुपमा बैंकले रिपो खुलाउँछ ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थामार्फत केन्द्रीय बैंकले तरलता समस्या समाधानका लागि रिपो जारी गर्छ । यो निकै छोटो अवधिको लागि मात्रै जारी गरिन्छ । अहिले नेपाल राष्ट्र बैंकले एक हप्ताको लागि रिपो जारी गरेको छ ।
पछिल्लो समय बजारमा तरलता अभाव रहेको चर्चा छ । केन्द्रीय बैंकमा पैसा थुप्रिएको तर बजारमा पैसा नभएको बैंकरहरु बताइरहेछन् । त्यसैले, राष्ट्र बैंकले बजारको समस्या समाधान गर्न रिपोमार्फत ५ अर्ब रुपैयाँ बजार पठाउन लागेको हो ।
कसरी जारी हुन्छ रिपो ?
बैंकहरुले अपेक्षा गरेको ब्याजदर खुलाई आफूलाई आवश्यक रकम राष्ट्र बैंकसँग माग गर्छन् । सबैभन्दा बढी ब्याज दिने बैंकलाई नै राष्ट्र बैंकले पैसा दिन्छ ।यसपटक राष्ट्र बैंकले ५ प्रतिशतभन्दा कम ब्याजदरमा रिपोको बोलकबोल गर्नेलाई प्रक्रियामा सामेल नगर्ने बताएको छ ।
एक सातापछि के हुन्छ ?
राष्ट्र बैंकले एकहप्ते रिपोका लागि बोलपत्र आह्वान गरेको छ । एक हप्तापछि बैंकहरुले रिपोस्वरुप लिएको पैसा फिर्ता गर्नुपर्छ ।
त्यसैले, यसलाई निकै छोटो अवधिको तरलता समस्या समाधानको साधन मानिन्छ । यदि एक सातामा पनि समस्या समाधान नभए राष्ट्र बैंकले पुनः रिपो जारी गर्छ ।